Ngwaahịa mara mma dị mkpa maka ọdịda | Bezzia
Ngwaahịa mara mma dị mkpa maka ọdịda
Nke Torres | 21/10/2021 20:00 | Mma
Site na mbata nke mgbụsị akwụkwọ na mgbanwe nke okpomoku, ọ bụkwa oge imegharị ma gbanwee ụfọdụ ihe ntecha. Oge ude mmiri mmiri arahụla, ntọala ọkụ na ngwaahịa akọwapụtara maka oge ọkọchị. Na oge ọhụrụ, ọ dị mkpa iji gbanwee ngwaahịa mma na ngwaahịa dabara adaba maka enweghị iru mmiri na gburugburu ebe obibi na oyi.
Akpụkpọ ahụ na -ata ahụhụ nke ukwuu site na mgbanwe oge, ọkachasị ndị kacha dị nro ma ọ bụ nwee nsogbu dịka atopic dermatitis. Ya mere, anyị ga -agbarịrị ngwaahịa ka ọ dabara na mkpa ọhụrụ. Ugbu a bụ oge ịchọ creamy creams.
1 Ngwa mma ndị a na -agaghị agbaghara n'oge mgbụsị akwụkwọ
2 Ihu na olu
4 Masks na patches n'etiti ngwaahịa mgbụsị akwụkwọ mara mma
Ngwa mma ndị a na -agaghị agbaghara n'oge mgbụsị akwụkwọ
N'otu ụzọ ahụ ejiji na -adabara oge ọ bụla, a ga -akpachapụ anya họrọ ngwaahịa mara mma ka ọ dabara maka oge ọ bụla. Mkpa akpụkpọ ahụ ma ọ bụ ntutu dị nnọọ iche na ile anya zuru oke ị ga -ewebata mgbanwe ụfọdụ na usoro mma. Mmalite nke oge oyi na -esonyere mgbanwe mberede na ọnọdụ okpomọkụ n'ụbọchị dum, nke na -etinye ahụike n'ihe egwu n'ihe ọ bụla.
Iji chekwaa akpụkpọ ahụ gị, ị ga -ewebata ihe ịchọ mma nke na -enye nri anụ ahụ chọrọ ka ọ bụrụ nwata ma lekọta ya nke ọma. Ndị a bụ ntọala ịma mma nke ị kwesịrị ịgụnye na usoro ịma mma gị nke daa, yabụ akpụkpọ ahụ gị ga -adịkwa njikere maka mbata oge oyi.
Ihu na olu
Banyere akpụkpọ ihu, ọ dị ezigbo mkpa ịchọ ndị na -etinye mmiri nwere ihe nchebe anyanwụ. Jiri ngwaahịa a kapịrị ọnụ maka ụbọchị yana nke ọzọ maka abalị. Ọ bụkwa oge zuru oke ịgụnye ọbara maka akpụkpọ ihu, yana vitamin, yana hyaluronic acid ma ọ bụ ihe ọ bụla nke ndị ọkachamara gbasara akpụkpọ ahụ na -ekwu maka ya nke ukwuu.
Akpụkpọ ahụ gbara anya dị oke mma ma dịkwa nro. Iji dobe wrinkles n'ọnụ mmiri, ị ga -etinyerịrị ngwaahịa maka mpaghara a. Chetakwa itinye ude mmiri na -agbaze mmiri n'olu, yabụ ị ga -ezere ịka nká nke akpụkpọ ahụ na mpaghara a. Iji mechie ihu, echefula iburu ya ezigbo egbugbere ọnụ iji lụso mmetụta oyi na akpụkpọ egbugbere ọnụ.
Ngwaahịa ọzọ mara mma nke na -agaghị efu na akpa mposi gị ọdịda a bụ ezigbo ude aka. Mgbe mgbụsị akwụkwọ rutere, akpụkpọ ahụ dị n'aka na -esiwanye ike ma na -agwụ. Anyị ekwesịghịkwa ichefu chebe aka site na ìhè anyanwụ, n'ihi na ọ bụ ha na -ebutekarị ntụpọ afọ. Tinye ụbọchị ọ bụla yana oge ọ bụla ịchọrọ ude aka, yabụ na ha ga -adị mma mgbe niile.
Masks na patches n'etiti ngwaahịa mgbụsị akwụkwọ mara mma
N'oge mgbụsị akwụkwọ, akpụkpọ ahụ chọrọ mmụba mmiri ọzọ maka nke a ọ nweghị ihe dị mma karịa ịnụ ụtọ nnọkọ izu ụka n'ụlọ. Họrọ otu ụbọchị iji ihe nkpuchi ga -eme ka anụ ahụ sie ike nke ukwuu. Kwa ụbọchị ị nwere ike iji ntụpọ na -agbada agbada n'akụkụ anya. Na mgbakwunye na hydrating akpụkpọ ahụ, ha zuru oke maka ibelata mbufụt. Ị nwere ike iji ha n'ehihie tupu itinye etemeete, nwa oge n'abalị tupu ị lakpuo ụra, ma ọ bụ n'ịkwadebe maka ihe omume dị mkpa ebe ị ga -ele anya dị egwu.
Iji mechie ndepụta ndepụta ngwaahịa mara mma nke na -ekwesịghị ịpụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, anyị ga -ekwu maka ntutu. Mgbe oge ọkọchị gachara, ngwa ọrụ na -ekpo ọkụ, igwe na -agbatị ntutu na ihe na -agbagharị agbagharị alọghachila. Agbanyeghị na ịchọrọ mgbanwe ihu na idozi ntutu gị dị mkpa iji nweta ya, ịkwesighi ịkwụsị iji ya ngwaahịa na -enyere gị aka ijigide anụ ahụ dị mma ma amamiihe.
Jiri ọta ọkụ tupu i jiri ngwaọrụ ọkụ. Mee ihe mkpuchi mmiri nke ukwuu ọ dịkarịa ala otu ugboro n'izu wee jiri ọgwụ na nsọtụ iji gbochie ha imeghe na ihicha n'ihi mmetọ na ndị nnọchi anya mpụga. Site na staples ndị a, ị ga -adị njikere ịnụ ụtọ oge ọdịda a na -enweghị ịta ahụhụ mbibi nke oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Ngwaahịa mara mma dị mkpa maka ọdịda
Zara na-ewepụta mkpokọta Studio ọhụrụ ya, chọpụta ya!